မည်သည့်အားကစားကိုမဆိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤစကားစုကိုသင်အကြိမ်ကြိမ်ကြားဖူးခဲ့ဖူးသည်။ သို့သျောလညျး, ဒီရေး -up, ကျနော်တို့၏မှတ်တမ်းများအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည် အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပြည်တွင်းပုရစ်လိဂ် ဒီပြိုင်ပွဲမှာချိုးဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကဘာတွေလဲ။ Chris Gayle ရဲ့ ၁၇၅ ပြေးပွဲကိုမင်းမှတ်မိလား။ ဒါမှမဟုတ် တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို 49 ပြေး? အဆင်မပြေပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အမှတ်တရများကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်စေပါ အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ်.
မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများ - ခေါင်းစဉ်အများဆုံး (၅ ကြိမ်) -
ကပြိုင်ပွဲအနိုင်ရမှကြွလာသောအခါ, မွန်ဘိုင်းအိန္ဒိယs ကအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။ အကြား IPL ၏ 13 ရာသီ, ဒီအဖွဲ့သည်အများဆုံးအကြိမ်အရေအတွက်, ဆိုလိုတာက5ကြိမ်များအတွက်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရခဲ့သည်, စံချိန်တင်ဖြစ်ပါတယ်။
မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းတို့၏အမွေအနှစ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် IPL ထုတ်ဝေမှုမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ IPL ၏ ၁၄ ခုမြောက်ကာကွယ်ရေးချန်ပီယံတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်သူတို့လည်းဒီနိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရနိုင်ရင်ငါတို့အတွက်သိပ်တော့မအံ့သြပါဘူး။
Chris Gayle 175 အပြေး
သူ့ကိုစကြဝUnာသူဌေးဟုလူသိများသည်။ သူသည်အချိန်တိုင်းသူ၏တန်ဖိုးကိုသက်သေပြခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုတည်းသောဝင်ပေါက်တစ်ခုတွင်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုပြောပါကသူဌေးကလည်းဤတွင်အုပ်ချုပ်နေသည်။ IPL ၏ ၂၀၁၃ ရာသီ၊ ခရစ္စတိုဖာဟင်နရီ Gayle Pune Warriors အိန္ဒိယကို ၁၇၆ ဂိုးသာသွင်းပြီး ၆၆ ဘောလုံးသာသွင်းခဲ့သည်။ သူသည် Brendon McCullum (၁၅၈ ပြေး) ၏တစ် ဦး ချင်းအမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးသူ၏ ဦး ထုပ်တွင်နောက်ထပ်အမွေးတစ်မျိုးထပ်ထည့်ခဲ့သည်။
Amit Mishra: ဦး ထုပ်အများစု -
Amit Mishra, ဒီ leggie IPL အတွက် ဦး ထုပ် - လှည့်ကွက်အများစု၏စံချိန်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ IPL အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပွဲ ၁၅၀ တွင် ဦး ထုပ်သုံးခုရှိသည်။ ၎င်းသည် SLLG Malinga ပြီးနောက် IPL ၏သမိုင်းတွင်ကက်တာအများစုကိုယူပြီးဒုတိယနေရာ၌ရပ်တည်ခဲ့သည်။
Harbhajan Singh: ပစ်ပေါက်နိုင်သည့်ဘောလုံးအရေအတွက်အများစု -
IPL ဆိုတာ batsman တိုင်း Bowler ကိုပြေးပြီးဂိမ်းတစ်ခုပါ။ T20 game မှာ dot ball တစ်ခုထည့်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ သို့သော် Bhajji သည်၎င်းကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်၊ သူသည်ဘောလုံးပစ်သူမှပစ်သည့်ဘောလုံးအများစုအတွက်စံချိန်တင်ထားသည်။ သူသည် IPL တွင် ၁၂၄၉ အစက်ဘောလုံးများပစ်ထားခဲ့သည်။
တော်ဝင်စိန်ခေါ်သူများဘန်ဂလို - IPL ၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးစုစုပေါင်း -
တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို ရာသီတိုင်း၌သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခဲ့သော်လည်းအသင်းများတွင်နာမည်ကြီးများအမြဲရှိခဲ့သော်လည်း၊
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီအသင်း Gayle 175 ပြေးခဲ့သည့်အတူတူပွဲစဉ်အတွက်တူ Pune Warriors အိန္ဒိယဆန့်ကျင်တစ်ခုတည်းဝင်ထွက်ခြင်း၌အမြင့်ဆုံးစုစုပေါင်းသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Virat Kohli ဦး ဆောင်သော RCB သည်အနိမ့်ဆုံးတစ်ခုတည်းဝင်ပေါက်စုစုပေါင်း ၄၉ ပြေးရှိသည်။ ထိုအနက်ရောင်နေ့ကိုသူတို့ဘယ်တော့မျှမမှတ်မိတော့ပါ ကိုလ်ကတ္တား Knight ကိုမြင်းစီးသူရဲ.
မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများနှင့်တော်ဝင်စိန်ခေါ်သူများဘန်ဂလို - Prediction & Preview ။ ဘယ်သူ ဦး ဆောင်မလဲ
IPL 2021 ကိုဘယ်မှာကျင်းပမှာလဲ။ 15.03.2021
IPL 2021 Odds - မတူညီသော IPL အသင်းများအတွက်လောင်းကစားပွဲများ 30.03.2021